မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ပုန်းအောင်းခိုလှုံနေကြတဲ့ မူးယစ်ရာဇာ ၁၀ ယောက်ကို စုံစမ်းရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးဖို့ ထိုင်းအစိုးရ မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့က မြန်မာအစိုးရကို အကူအညီတောင်းခံလိုက်ကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်း က ဖေါ်ပြပါတယ်။
အဲ့ဒီ မသင်္ကာသူ ၁၀ ဦးအတွက် ဖမ်းဝရမ်းကိုလည်း ONBC ခေါ် ထိုင်း အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေး အဖွဲ့ရုံး က မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို ပေးအပ်ထားကြောင်း၊ မသင်္ကာသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဆီ ထွက်ပြေးခိုလှုံနေကြတာဖြစ်လို့ ဖမ်းဆီးဖို့ခက်ခဲကြောင်း၊ သူတို့ကို ခြေရာခံဖမ်းဆီး ဖို့ မြန်မာအစိုးရက ကူညီပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ONBC အတွင်းရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီ မသင်္ကာသူ ၁၀ ဦးထဲမှာ ကွယ်လွန်သူ မူးယစ်ရာဇာ ခွန်ဆာရဲ့ လက်ထောက်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ယီဆယ် ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူဟာ အခုအခါ မူဆာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး၊ ၀ လူမျိုးစုအဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ရတယ်လို့ ONBC အတွင်းရေးမှူး က ဆိုပါတယ်။ ယီဆယ်အဖွဲ့ဟာ ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် ချင်းရိုင်ခရိုင် မယ်ဖါလောင်းအရပ်မှာ လှုပ်ရှားနေပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကို မူးယစ်ဆေးမှောင်ခို သွင်းနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ONBCအနေနဲ့ ယီဆယ်အဖွဲ့အပြင် တခြားမူးယစ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခြားမသင်္ကာသူ ၁၄ ဦး ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို လည်း ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ထားရာမှာ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂၂၂ သန်း ဖိုးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုက ဘိန်မူးယစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းပတ်သက်နေပါတယ် ၊ ၀ တို့ ကိုးကန်ဖုန်ကြားရှင်တို့ TNLA;SSA;KIA အစရှိသည်တို့ဟာ မူးယစ်နဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှောက့်နေးခြင်း လက်နက်များမစွန့်လိုခြင်းတို့မှာ ယင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
Jul 29, 2015 06:16 AM
Those of India and Thai insurgent affair are political tricks, Bangaladesh give shelter and training for bangalis against Burma, China is giving every help and supports to WA and Kachin, etc are alot. All mof you should stop same time.
ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲက နှောက်နှေးနေတာပါ
ကေအိုင်အေက အင်ဘန်လက ပထွေးအခါတော်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်နေပီး ပထွေးအလိုကျ ဘိန်းရာဇာ ဖုန်းရာဇာဖုန်ကြားရှင်ကို အတင်းပြန်ပွဲ ထုတ်နေတာပါ၊ပထွေးကကေအိုင်ကနေကစားလိုက် ဝကနေတဆင့်ကစားလိုက်လုပ်နေတာပါ။အလားတူဘင်္ဂလီကိတ်စလည်းအတူ၂ပါပဲ
Jul 27, 2015 09:50 PM
မှန်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်နီးချင်းဆိုးတွေကြောင့်တည်ငြိမ်မှုအပြည့်ဝမရသေးတာပါ ။ ဒါကိုတိုင်းရင်းသားတွေနားလည်သင့်ပီ
Jul 27, 2015 09:52 PM